हामीले उपलब्धी पुनः गुमाउककदै छौ - Marganugami Daily
Marganugami Daily Bichar हामीले उपलब्धी पुनः गुमाउककदै छौ
हामीले उपलब्धी पुनः गुमाउककदै छौ
सककसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावलाई छाँयामा पार्न फेरि नयाँ संविधान संशोधनको गृह कार्य शुरु भएको छ । संविधानको धारा ८४ ले प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० सिट गरी प्रतिनिधि सभामा २७५ संसदको व्य
वस्था गरेको छ । संविधानको धारा २८६ बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको आयोग बनाउनुको सट्टा सरकारले पुरानै २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । यसका लागि नयाँ खाले संविधान संशोधनको छलफल शुरुवात भएको छ ।
यहाँ स्मणीय कुरा के छ भने संविधान पास गर्ने बेलामा हामीले १६५ संसदीय क्षेत्र व्यवहारिक भएन, संख्या बढाउनु पर्दछ भन्दा संविधान बिरोधीको बिल्ला भिडाइयो । आखिर आफैले उत्कृष्ट भनी घोषणा गरेको संविधानको मुख्य धारा नै संशोधन गर्नु किन प¥यो ? फेरी यहाँलाई स्मरण गराउँ, मधेस आन्दोलन पश्चात संविधानको यही धारा ८४ मा संशोधन गरी जनसंख्यालाई मुख्य आधार भनिएको थियो । ठीक छ संशोधन गर्ने भए गर्नुस्, अहिले कै २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी राख्नुस् तर खबरदार समानुपातिक तर्फको ११० सिट चलाउने पाइदैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत घटाउन पाइदैन । यो संविधानले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अगिंकार गरी सकेको अवस्थामा त्यसको मर्म विपरित २४० प्रत्यक्षलाई प्रतिनिधि सभामा राख्ने, बाँकी ११० समानुपातिक सिटलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर गाँस्नु सामाजिक, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको विपरित हो ।
यसमा मधेसवादी दलले पनि सहमति जनाउलाई किनभने पहिला जनसंख्यालाई आधारमानी निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको थियो । हो यो सत्य हो, तर हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धी समानुपातिक सिट घटाउँदा त्यसले आन्दोलनको मुख्य उपलब्धी डायलुट हुन्छ । सबै समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर गाँस्नु भनेको राष्ट्रिय सभालाई औचित्यहीन बनाउनु हो । सर्वाेत्कृष्ट संविधानको पाइला पाइलामा संशोधन हामीले यही कुरा भन्दा गोली खानु प¥यो, अहिले फेरि आफुहरु त्यही ठाउँमा पुग्दै छन् ।
सिद्धान्ततः मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दुवै सभामा समानुपातिक सिट आरक्षित गरेको छ । जसलाई एउटा सभामा मात्रै सिमित गर्न सकिदैन । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष रुपमा सिटलाई राखि सरकार बनाइ सत्ता हाक्ने र राष्ट्रिय सभालाई हो हल्ला गर्ने सभा बनाउने । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संविधानको मुल मर्म भित्र पर्ने भएकोले दुवै सभा लागु हुन्छ । यो विषय संविधानको प्रस्तावना देखि लिएर अभिन्न अंग बनिसकेको छ ।
फेरि अर्काे महत्वपुर्ण विषय २४० प्रतिनिधि सभा १६९ (११० समानुपातिक सिट र हाल राष्ट्रिय सभामा रहेको ५९ जोड्दा) र २४० को दोब्बर बिधान सभा ४८० लाई जोड्दा ८८९ को जम्बो संसदको भरण पोषणमा देशलाई पर्ने आर्थिक भारको आँकलन पनि गर्ने की ? भर्खरै मात्र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुअल म्याक्रोनले फ्रान्समा दुवै सदनगरी ९२५ जना सांसदको टिम जम्बो भयो, देशलाई आर्थिक भार थेग्न गाह्रो भयो भनेर कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाम्रा देउवाजी, ओलीजी र प्रचण्ड जीले सानो संख्यालाई ठुलो बनाउने योजना अघि सारेका छन् जसमा कतिपय मधेसवादी दलले पनि औठा लगाउँलान् । खुशी लाग्यो, हामी फ्रान्स भन्दा पनि आर्थिक रुपले शक्तिशाली रहेका छौं ? रैन्टसिकिंग देशहरुको बेहाल यस्तै छ । राजनीतिक सहमति मिलेपछि जे पनि गर्न पाइयो । हुलाकी न्यूजबाट